Ungazifumana njani iindawo zeLigi esele ekhohlo e-Itali | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ungazifumana njani iindawo zeLigi esele ekhohlo e-Itali
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 12/06/2020)
ciao! Zibone uhlela uhambo elinqabileyo ebomini ku Italy! Yeyona awazalelwa kuyo ngokutsha kunye isixeko izithembiso ukuba elate kwaye ungakukhuthaza ngenxa yemisebenzi yabo yobugcisa, bokwakha, kunye nothando lwayo ehambelana nokutya. Italy kuhlala yokwenene yokupheka. Macwecwe nje wakhonza nokudla, ukuba indalo. Xa uhlola esi sixeko ovuthuzayo wonder, nga apho ukufumana iindawo impahla ngasekhohlo in Italy?
Ukuhamba kwayo izitrato cobbled, Ukufika kwindawo ethandwayo, kwenza i-emele-uluhlu kuyo. Inye kuphela kungonakalisa romance kukuba ukuwutsala impahla yakho ndawonye nawe ngenxa yokuba ngubani ofuna ukuba uthwele yonke uya? Impahla yasimahla kunye noyolo yindlela yokuhamba ujikeleze i-Itali kwaye ukwenza oku ungasebenzisa inani leendawo zemithwalo esekhohlo e-Itali.
Inketho ekhuselekileyo nelula yokugcina imithwalo, kwi ifika, kuba kwisikhululo seenqwelo-moya okanye ukuba une usuku simahla ngaphandle ihotele. Khumbula ukuba moya hub enkulu oku kuyinto elula, kodwa izikhululo zeenqwelo-moya ezincinane kuba trickier ukuze benze uphando yakho phambi kwakho usiya kwisikhululo ozikhethileyo. Kungcono ukujonga ngaphambi kwexesha ngokutyelela iwebhusayithi ye-airport ukufumana iindawo zemithwalo eseleyo e-Italy.
Milan Malpensa Airport Yiloo imithwalo ekhohlo ukwakweli Arrivals kwinqanaba Terminal 1. It ivuliwe imihla ukususela 6 am ukuba 10 pm. iindleko ziyahluka, ngokuba into encane, Ungathi kengoku kuhlawula ngayo € 3,50, kwinto enkulu malunga ne- 4 4 kwaye nganye nganye 24 iiyure.
ERoma Fiumicino Airport Yiloo imithwalo sasekhohlo kumgangatho osezantsi of Terminal 3. It ivuliwe imihla ukususela 6:30 am ukuba 11:30 pm kwaye iya kuxabisa malunga € 6 into nganye isithuba ezingama-24.
Venice Marco Polo Airport kaThixo ofisi imithwalo ekhohlo kumgangatho ophantsi, ngaphakathi terminal moya kwi ukufikelela 1. Zivulekile yonke imihla ukusuka 5 Ndiza ku 10 pm, kodwa namaxesha zisenokwahluka ebusika.
Izikhululo zoololiwe apho unokugcina khona umthwalo wasekhohlo
Iindawo zemicimbi e Roma
ERoma kwizikhululo zikaloliwe amathathu aphambili, Ostiense, Roma Termini, kunye neRom Tibhutina. Wonakalisiwe ngenene ekukhetheni xa kufikwa kubaboneleli bokugcina iindawo zemithwalo esekhohlo e-Italy.
Ukuba Ukudlula ngesitimela yemini, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, ethile self-nkonzo.
Ungalindela lomvuzo phakathi € 10 € 15 ngosuku, kwi-avareji. Njengenqaku ezincinane ezisecaleni, kwizikhululo zikaloliwe zikulungile nokuzigcina ngokutya nangamanzi losuku, abaqashileyo Bikes nokuzoba imali.
Iindawo zemicimbi e Milan
Uloliwe yeyona ndlela ilula yokuhamba ngeYurophu naseMilan, kukho izikhululo ezine eziphambili zikaloliwe, Milano Lambrate, milan Rogoredo, Milano Centrale kunye Milan Porta Garibaldi.
Njengokuba besesitshilo ngaphambili, akukho ukunqongophala abanikezeli nkonzo kuba imfuneko enkulu xa sendleleni.
Ubuninzi bexesha lokugcina kunye neeyure zeendawo zemithwalo eshiyekileyo e-Italy ziyahlukahluka kwizikhululo ezahlukeneyo kwaye uya kuhlawula umyinge we- € 10 ukuya kwi-15 ye-15 ngosuku.. Kusenokubakho izithintelo ubunzima, Ngamanye amaxesha qiniseka ukuba ujonge kwakhona.
IVenezia Santa Lucia sisona sikhululo sikaloliwe saseVenice kwaye inezinto ezininzi ezinokukhethwa kuzo kwiindawo zemithwalo ese-Italy. Oku kuyafana ne Milan neRoma, Indibano yeVenice Ixabiso elifanelekileyo lokugcina umthwalo.
Abanye iya kuba umahluko ubunzima kunye umahluko ixesha kunokwenzeka. Self-service iivenkile ilokhari zibekwe lula lonke eVenice.
Iindawo zasekhohlo zeLigi Ngokujikeleze iSixeko kwiihotele
uthotho lwakho lokuqala umnxeba iya kuba hotel yakho, hostele, okanye i-Airbnb yendawo yasekhohlo yomthwalo. Emva kokuba bahlolwe kuzo, musa ukoyika ningaceli ngenxa yokuba izithuba ezininzi ziya baphathe lasekhohlo for free. Its ngokuqhelekileyo kuphela isixa esithile ixesha ngoko qiniseka ukuba ezo iinkcukacha ezifanelekileyo.
Buza kwidesika malunga iinketho ukuba isefu nakwiilokhari. Shiya imadlana encinci xa unika umthwalo wakho esangweni.
Ukushiya umthwalo Bucala Iinkonzo
Stow Bags zakho
Le ukhetho ethandwayo yaseYurophu kwaye negama ogcwele. Siza swi Italy kwaye namasebe eRoma, milan, Florence, Naples, Pisa, Catania, kunye noBari, ukuqinisekisa ukuba ukugquma zonke Italy kunye nemizi yayo esidumileyo. Self-nkonzo ngumceli-ukhetho olukhulu.
imigca Kuphephe kunye basebenzisa kweekhamera iiyure ezingama-24 yaye okubaluleke, bag yakho inshorensi ukuba ukuya € 300.
Ofisi zemithwalo Ukugcinwa
Le impahla lasekhohlo ukhetho oluthile eVenice.
Uya kubafumana kwiholo yokufika kwesikhululo seenqwelomoya iVenice Marco Polo, Venice Santa Lucia Station Railway, kwiPiazzale Roma, kunye nepheyishini yokuhamba ngenqanawa yeVenice. Kokuba uye ibekwe iindawo zokuhamba. Oku kwenza ukhetho elifanelekileyo yiwa uye.
Xa ukuya Italy kwaye kufuneka iindawo impahla lasekhohlo, ke ngoko kubalulekile ukujonga kwangaphambili uhambo lwakho. amaxesha Hlola, Jonga isithintelo sobunzima, kwaye ujonge iindleko, Lungela! okubaluleke kakhulu, enjoy Italy, imithwalo khulula.
Namathela Gcina A Isitimela Ukufumana ezona ndlela zikhethileyo zexabiso elikhoyo ngexabiso elifanelekileyo!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Iindawo zasekhohlo zeLigi e-Italiyo kunye nendlela yokuzifumana” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-italy%2F%0A%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel eurotrip intsalela longtrainjourneys Iityesi train Travel travelitaly
Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSweden, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe